Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland oo oggolaaday in dib loo dhigo ka doodista xeerka Isgaarsiinta – Kalfadhi
November 9, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan, ku-xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman iyo ku-xigeenka 2-aad Mudane, Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa maanta shir-guddoominayay fadhiga 10-aad ee Kalfadhiga 47-aad Golaha Wakiillada Dawladda Puntland.
Fadhiga maanta oo Ajandaha ahaa ka doodista xeerka Isgaarsiinta Puntland ayaa dib loo dhigay illa maalinta Arbacada, kaddib codsiga Guddiga Arrimaha Bulshada iyo Dhaqanka Golaha Wakiillada DPL oo xeerka gacanta ku haya.
Xildhibaanada Golaha Wakiillada Dawladda Puntland ayaa cod aqlabiyad ah ku ogolaaday in labo maalmood oo dheer ah la siiyo Guddiga sida uu qabo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada Qodobkiisa 58-aad iyo Qodobka 70-aad ee Dastuurka Dawladda Puntland Puntland.
Madaxweyne Farmaajo oo dhallinyarada kala hadlay doorkooda ku aaddan dib-u-dhiska dalka iyo adkeynta dowladnimada